Runway တွေပေါ်မှာ ပြန်လည်တွေ့ရတော့မယ့် စူပါမော်ဒယ် Naomi Campbell – FemaleWear.net
Naomi Campbell ဟာဆိုရင် နာမည်ကျော် ဗြိတိသျှ စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသက် (၁၅)နှစ်ကတည်းက Runway တွေ လျှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Spring 2005 couture collection show မှာ နောက်ဆုံး လျှောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄ နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ Fall 2019 menswear shows မှာ ဧည့်သည်အနေနဲ့ ပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်း ပြင်သစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Valentino’s Spring 2019 couture presentation မှာ စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ catwalk လျှောက်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၄)နှစ်က နောက်ဆုံးလျှောက်ခဲ့တဲ့ Spring 2005 couture collection ပွဲမှာ သူမဟာ ဒီဇိုင်နာ Pierpaolo Piccioli ရဲ့ အီတလီနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ အနက်ရောင် dress ကို ဝတ်ဆင်ပြီး runway လျှောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနစ်တုန်းက Runway တစ်ခုမှာ သူမဟာဆိုရင် ပါးတဲ့အနက်ရောင် ဇာဂါဝန်ကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
Closing @maisonvalentino‘s Spring 2019 couture show ??? Congratulations onahistorical moment, done in such an elegant manner no words needed to be said.. blessed to be part of such an incredible, spellbinding moment. Thank you ✨✨ @pppiccioli ♥️♥️??
သူမက Runway လျှောက်တဲ့ ပုံစံက ကွဲပြားနေပါတယ်။ Sexy တအားကြီး မဆန်ဘူးလို့ မိတ်ဆွေဖြစ်သူ Maya (အဆိုတော်) က Vogue မဂ္ဂဇင်းကို ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမဟာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဘုရင်မတစ်ပါးလို့လည်း သူမက ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီး brand တွေ ဖန်တီးတဲ့ ဒီဇိုင်နာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဝတ်စုံတွေဟာ သူမနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်လို့ မြင်ကြပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီး brand တွေကို ဖန်တီးတဲ့ ကုမ္မဏီတွေကလည်း သူမနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
Naomi Campbell ဟာဆိုရင် ဗြိတိသျှ စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်သလို အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပြုလုပ်နေတဲ့ နာမည်ကျော်တစ်ဦးပါ။ ၁၉၇၀ ခုနစ်ဖွားဖြစ်တာကြောင့် အခုချိန်မှာ သူမဟာ အသက် ၄၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ ၁၉၉၁ ခုနစ်က ပြသခဲ့တဲ့ Cool as Ice ဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက မင်းသမီးနေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့၂၀၁၅ ခုနစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ Empire ဖြစ်ပါတယ်
Tags: Celebrity, Return, Runway